Sida loo download music in Windows Media Player?
1 Dhibaatooyinka Play
MP4 1.1 Play
1.2 Play MKV
1.3 Play FLAC
DVD 1.4 Play
1.5 Play FLV
1.6 Play AVI
1.7 Play MP3
1.8 Play MOV
3GP 1.9 Play
1.10 Play M4A
1.11 Play YouTube
1.12 ciyaaro No Sound
1.13 Player aan shaqayn
1.14 3 Solutions Play Dhibaatooyinka
2 Basic Isticmaal Talooyin
2.1 Player codec
2.2 Player 12
2.3 Player plugin
2.4 Lyrics plugin for Player
C00d11b1 2.5 Error
2.6 uninstall Player
C00d1199 2.7 Error
2.8 Repair Player
2.9 Player shilalka
2.1 Player 64 yara
2.11 Haragba Player
2.12 Player for Windows 7
2.13 Player Update
2.14 Player 2015
2.15 Player Alternative
3 Function Skills
3.1 Download Music inay Player
3.2 dar Music inay Player
3.3 Guba DVD la Player
3.4 Player Visualizations
3.5 Player subtitles
3.6 Player Extension
3.7 Player Radio
3.8 Player Blu Ray
3.9 Player DLNA
3.10 Player tuuryo
Windows Media Player waa ciyaaryahanka ugu music hidi-ka nidaamka Windows ka hawlgala. Waxaad ka ciyaari kara ma aha oo kaliya audio / video files dhex laakiin sidoo kale ku dari kartaa files badan oo cusub si ay maktabadda. Files kuwaas lagala soo bixi karaa internet-ka ka aad. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad muusiko dhegayso online, waxaa jira bogag badan oo ku siin doonaa xarunta this. Halkan waxaa ku qoran liiska 5 websites sare oo u oggolaan doonaa in aad muusiko dhegayso online oo aan wax lacag ah bixinin hal:
Mog waa guri in ka badan 15 milyan oo heeso ka soo kasta Misbaax. Ha noqoto ee ciyaarta hip hop Ingiriisi kuwan raadkaygay ama groovy music dambeeyay Bollywood, Mog uu leeyahay wax walba oo ay dukaanka!
Muuqaalada Muhiimka ah:
1: duwan Wide ee liiska song uu ka soo xusho.
2: Songs on Misbaax kasta helaan lacag la'aan ah.
Mid ka mid ah idaacada online ugu fiican oo ugu jecel yahay, in aad sidoo kale ka codsan kartaa inuu u ciyaaro aad song ama isku shaandheyn iyada oo ay kala duwan weyn ee songs online.
1: ogolaanayaa inaad si aad u codsato aad song raadiyaha.
2: ogolaanayaa inaad si deg deg ah isku shaandheyn gudahood tiro balaadhan oo ah heesaha.
8Tracks.com waa website la yaab leh kaas oo hadda kuu ogolaanayaa inaad si ay u dhagaystaan ​​heesaha sida ay niyadda.
1: website A gabi ahaanba kala saaraa oo awood song raadinta sida ay niyadda.
2: interface fudud in la raadiyo music aad ugu jeceshahay.
Haddii aad mar walba doonayay dhamaystiran maktabadda hees naftaada, markaas waa in aad tagtaa website-kan. Website A nidaamsan iyada oo tiro aan xad lahayn oo ah FM iyo movie songs xaqiiqo ah kuugu soo jiidan doonaa.
1: Lambarka Unlimited heeso ka wada.
2: The dhamaystiran liiska song waxaa loo qabanqaabiyaa alphabetically taas oo macnaheedu yahay in raadinaya hees waa u fududahay.
Slacker waa website aad u xiiso leh kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala si ay u dhagaystaan ​​iyo sidoo kale kala soo bixi kuwan raadkaygay music ah. Bogga internet ku waa guri aad tan oo ay ku jiraan heeso hore iyo sidoo kale heeso style casriga ah. Haddaba iyagii suunka iyo bilowdo ka eegay u track aad ugu jeceshahay.
1: Users maqli karo iyo sidoo kale kala soo bixi heesaha.
2: Slacker uu leeyahay qaar ka mid ah heesaha ugu da'da weyn ee ay maktabadda taasoo si fudud u soo bixi karaa.
Ma doonaysaa inaad kala soo baxdo si xawli caadi music ugu danbeeyay ee aad Windows Media Player? Waxa jira dhowr hab oo aad sidaa hadda sameyn kartaa maalmood. Si kastaba ha ahaatee siyaabaha ugu sahlan oo si fudud loo download music in windows media player waa software TunesGo ay Wondershare TunesGo bixisaa tiro ka mid ah muuqaalada in dadka isticmaala ay taas ka mid ah:
1. dajinta Dufcaddii iyo qaab file laga badalay.
2. TunesGo taageertaa tiro ka mid ah website-yada video ka halkaas oo aad si dhakhso ah ugu soo bixi kartaa videos qeexitaanka sare.
3. TunesGo bixisaa xarunta si loogu badalo videos qaab kasta oo la doonayo; Sidaas daraaddeed waxaad kala soo bixi kartaa Cajalado / videos in qaab kasta oo loogu badalo ka dib.
4.088.454 oo qof ayaa u soo bixi
Haddii aad rabto in aad kala soo bixi kuwan raadkaygay music iyada oo software TunesGo Wondershare, ka dibna raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 1 Ku rakib software TunesGo ah
Software TunesGo by Wondershare gebi ahaanba bilaash ah oo ah qiimaha iyo waxaa lagala soo bixi kartaa adigoo gujinaya on this link : http://www.wondershare.com/tunesgo/ . Marka aad soo bixi software, waxaad si deg deg ah ku rakibi kartaa inay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka ay.
Tallaabada 2 Download aan xad lahayn music iyo YouTube videos
Marka aad soo bixi oo lagu rakibay software TunesGo by Wondershare, waxa aad bilaabi kartaa in aad soo degsado music jecel qaab maqal iyo muuqaalka leh.
Tallaabada 3 Import music ka soo dejisan in media player
Ka dib markii ay soo dajinta Maqalka tarin iyo video dhex TunesGo, hadda aad u dajiyaan kartaa Windows media player. The files soo bixi hore u noqdaan qayb ka mid ah maktabadda TunesGo, laakiin waxa kale oo aad iyaga dajiyaan kartaa Windows Media Player ama arrimo kale / qalab kasta oo android.
Sida loo Play SopCast on VLC?
Black Screen: Windows 7 aan kabaha doonaa
Windows ma bilaaban doona, oo aan xitaa in Safe Mode
Top 8 Apps Music for Windows Phones
Transfer Xiriirada ka Nokia in Android Effortlessly
Sida loo Unlock Windows Phone 8.1 Horumarinta
Sida loo sii qulquli Video kasta oo ka PC in TV Apple
Hel Xilisoft Best Kale Video Converter Ultimate for Windows
Windows 7 Undelete: Sida loo Undelete Files in Windows 7
Sida loo Copy Xiriirada ka Android inay PC
> Resource > Windows > Sida loo download music in Windows Media Player?